Kukadzi 14, 2018 arun
Mario Draghi, purezidhendi European Central Bank, akati hazvina basa rake sangano raMwari waidzora cryptocurrencies.
Senzira ECB raMwari #AskDraghi Video dzakatevedzana, aimbova Italian nechepakati bhenga akati aona vanoshandisa akawanda Twitter bvunza kana ECB kuti chengetedza kana kunyange kurambidza bitcoin.
“kwete Ndicho ECB kuitwa kuita izvozvo.”
Blockchain chinhu unyanzvi kuti kunatsiridza kunyatsoshanda. Tiri dzinoongorora kana ringashandiswa pachedu mabasa edu mune ramangwana. Pamusoro bitcoin uye kana iwe unofanira kuvimba nayo, President Draghi rinokurudzira chenjedzo, sezvo haina kunotsigirwa chero Central Bank kana hurumende, achiwedzera kuti haisi ECB kuti basa waidzora nayo.
Qtum - Tough, User Ready, uye ...
Previous Post:Sei Coinbase ari kupomerwa overloading ari Bitcoin zvakarukwa uye sei SegWit mabasa ?
Next Post:Fidelity rudo anogamuchira $ 70M muna Bitcoin mipiro panguva 2017
Kukadzi 23, 2018 pa 8:40 PM
Kurume 1, 2018 pa 9:02 AM